Design kanye nokuklanywa egumbini abazali kanye nengane
Inani elikhulu of imindeni enezingane bahlala ezindlini elilodwa elalingaphandle, futhi ezimweni ezinjalo eziphilayo zinzima kakhulu ukuba kwahlukaniswe isikhala ukuze wonke umuntu kwadingeka indawo yabo siqu. Nokuklanywa egumbini ngoba abazali ingane - inkinga Yiqiniso, kunzima, kodwa doable. Isimiso zalo eziyisisekelo - division of isikhala kule ndawo abadala kanye nezingane sika.
ekhoneni Wezingane kufanele zitholakale alisuse emnyango, njengoba izingane, ukusheshe ulale usukume kamuva kunabazali bazo. Ngenxa yalesi sizathu, ekhishini kungcono ukubeka umnyango ezinhle obukhulu ukuze ukuthatha izivakashi kusihlwa, nikwazi ukuthwala ngokuphepha ingxoxo.
Nokuklanywa egumbini abazali kanye nengane kungaba kwenziwe ngezindlela eziningana:
Beya iminyango. Lokhu kukhetha nokuklanywa esiwusizo kakhulu. iminyango ayevumela ngisho Igumbi evulekile ihlukaniswe izikhala ezimbili ezihlukene. Lokhu kukhetha efanelekayo kahle, uma ingane has a big kunalokho futhi kudinga endaweni avaliwe yangasese.
LamaKhomanisi. Nokuklanywa kwe-indawo ingane lesi sici, uma kunesidingo, angajoyina egumbini ndawonye, isibonelo, nanoma celebration umndeni.
Gypsum plasterboard ukwahlukanisa izindonga futhi nemengamo - Luhle ukwehlukanisa isikhala yangasese kwentombazane efulethini studio.
Uphahla lwangaphakathi lokuhweba kanye phansi ephakanyiswe. Kuvele samuntu a ndlela nokuklanywa, lapho ingane incane kakhulu, futhi ngaso sonke isikhathi kumele kube emehlweni plain.
Ukubekwa ifenisha. Lezincwadi, lezincwadi noma iKhabhinethi kuyoba umkhawulo kuhle isikhala umfundi. Nokuklanywa egumbini abazali kanye nengane ngosizo izingcezu ifenisha, okuyinto iyoba uhlobo isithiyo, ngokuya ukusebenza - ukhetho best.
Kusukela embhedeni enkulu double kungcono ukuba ngiphane ngakho, ngeke kube njengoba nje obusebenzayo njengoba usofa, lapho ungakwazi nje hlala phansi ukubukela i-TV futhi wamukele izivakashi, kodwa indawo economized ungafaka ukuma noma itafula ikhofi. niche sombhede kanokusho futhi iwusizo ukugcina izinto. Udonga okuphambene usofa nigcwaliswe ewumngcingo emashalofini ensikeni, futhi ngokwemvelo, plasma panel.
Umbhede ngokwengxenye yezingane egumbini iyadingeka kanye emsebenzini, ngakho kungcono kakhulu ukukhetha ifenisha compact ukuthi kuthatha isikhala okuncane futhi angazamukela zonke ngokwako. Lokhu kungaba isakhiwo esinezitezi ezimbili, esemgwaqweni ku phansi embhedeni wesibili kanye emhlabathini - itafula nekhabethe.
Amathiphu ukuhlela kanye nomklamo
Kuchazwa imingcele isikhala, ukubiywa kwalezo zindawo ezilungele amakamelo abazali nengane ungakwazi ukugcizelela Umbala. Ake umzali egumbini uzobe agodliwe ngemibala egqamile, kodwa ingxenye kangcono kid sika ukugcwalisa ngemigwalo elikhanyayo ezimibalabala. Ngokuqondene umhlobiso ukuze izingane ezindala, kungcono ukulalela izifiso endaweni yezingane yomnikazi, ukuze ezizwa khona.
Ukuze uhlele kahle isikhala, akudingekile ukuba zihlale phakathi komqondo othile nomunye, kungcono cabanga ezahlukene imibono Igumbi nokuklanywa, efanayo isithombe izakhiwo kuzosiza sithole choice.
Loft isitayela amafulethi yesimanje
Ukuhlobisa izindonga: imibono, izinto, imihlahlandlela
Imithombo yezimali ibhizinisi: izici imithombo eyinhloko